यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सेक्स गुरु, जसले घरमै आएर यौनक्रिडा गर्ने तालीम दिन्छन् Nepalpatra यस्तो पनि हुँदो रहेछ, सेक्स गुरु, जसले घरमै आएर यौनक्रिडा गर्ने तालीम दिन्छन्
तपाइँले पाककला, सिलाइ बुनाई लगायतका विभिन्न सीप सिकाउने तालीमका बारेमा सुन्नुभएकै छ । घरमै आएर पढाउने होम ट्युसनका बारेमा पनि जान्नुभएकै छ । तर के घरमै आएर यौनक्रिडा गर्न सिकाउने तालीम पनि हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभएको छ ? सायद छैन होला । तर केन्नेथ प्ले नामका एक पुरुषले घरमै आएर सेक्स गर्न सिकाउँछन् ।
केन्नेथ आफ्ना ग्राहकको घरमा आउँछन्, ग्राहकका लोग्ने स्वास्नीले सेक्स गरेको हेर्छन् अनि कसरी राम्रो तरिकाले आनन्ददायी यौनक्रिडा गर्ने भनेर टेक्निक सिकाउँछन् । पार्टनरहरु सेक्स गरिरहँदा उनले विभिन्न यौन आसन, पाकक्रिडाका विधि आदिका बारेमा बताउँछन् जसका कारण लोग्ने स्वास्नीले यौनमा भरपूर आनन्द उठाउन सकून् । यसरी घरमै आएर सेक्सको तालीम दिने केन्नेथले अमेरिकाको न्यूयोर्कमा यस्तो सेवा संचालन गर्दै आएका छन् ।
के यसरी सिकाइरहँदा जेन्नेथले कतै ग्राहकसँग पनि सेक्स गर्दछन् त ? अँह, उनले महिला ग्राहकलाई यस्तो केही गर्दैनन् । व्यवहारिक रुपमा सेक्स सिकाउन जेन्नेथले कहिलेकाहीँ आफै आफ्नो महिला पार्टनरलाई तालीम कक्षामा लैजान्छन् भने कहिलेकाहीँ सेक्स डलसँग आफुले सेक्स गरेर ग्राहकलाई सिकाउँदछन् । (एजेन्सीको सहयोगमा)
दुर्लभ किसिमको घटना : पाँच श्रीमतीले गरे करोडपति ओनोजाको बलात्कार
आफ्ना श्रीमान्लाई छाडेर सौतेनी छोरासँग बिहे गरेकी रुसी ब्लगर आमा बन्दै